Aha ya bụ Ted Bundy - iHorror
Mbido Genzọ SubrorresEzi Mpụ Aha ya bụ Ted Bundy
Aha ya bụ Ted Bundy
by Piper St. James January 31, 2020 1,299 echiche
Taa Amazon weputara ebe ha docuseries Ted Bundy: Fda maka egbu mmadu. Ọ bụ ezie na Bundy enweghachiri ọhụụ n'ihu ọha n'ime afọ ole na ole gara aga, usoro a ahọrọla ilekwasị anya na anya ọhụrụ. Ugbua ndi nwanyi nke serial killer na-ekwu.
Omeela ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị a ọtụtụ afọ, ọtụtụ iri afọ iji gosipụta ahụmịhe ha. Ha na-arụ ụka na a na-eleghara akụkọ ha anya maka akụkọ banyere "dike" nke akụkọ ahụ; ike gwụrụ ha ka a na-eto Ted Bundy.
Ọ bụghị ọtụtụ ndị ahụ nwụrụ na Bundy gbapụrụ, mana na enweghị ha ndị ezinụlọ ha na ndị enyi na-ekwuchitere ha, ọtụtụ na nke mbụ. Ihe ndi ozo n'eme ka ndi nwanyi mara ihe n'uzo ndi ederede, akwukwo, na akwukwo ndi gara aga. Ha abughi nani aha ma obu ihe osise. Ha bụ ụmụ nwanyị, ụmụnne nwanyị, ndị enyi, ụmụ klas. Emechara nye ndi nwanyi a ihe kariri iri afo ano.
N'afọ ndị 1970 maka Womenmụ nwanyị
Docuseries na-echeta etu mbido mbido 1970s siri bụrụ nzuko nke nnwere onwe mmekọahụ na mgbanwe mgbanwe nke ụmụ nwanyị. Womenmụ nwanyị chọrọ ịha nhatanha ohere ma nwee ike ịchịkwa ahụ ha, mmekọahụ, na ọmụmụ. Ha achọghịzi ichezi echiche nke ịbụ ndị a hụrụ dị ka ihe mmekọahụ; na ths mere otutu ndi ara.
Ọ bụghị naanị na nke a hụrụ na kọleji dị iche iche na klọb guzobere ọhụrụ, klaasị gbasara ọmụmụ ụmụ nwanyị, na nzukọ, mana na mgbasa ozi. Igwe onyonyo gosipụtara dị ka Mary Tyler Moore na Girl ahụ gosipụtara ụmụ nwanyị nọọrọ onwe ha na-ebi ndụ nke onwe.
Elizabeth na Molly Kendall
Womenmụ nwanyị abụọ na-achịkwa akụkọ a na akụkụ nke otu bụ Elizabeth "Liz" Kendall na nwa ya nwanyị bụ Molly. Nwa nwanyị ahụ na nwa ya nwanyị ebidolarị ọtụtụ afọ n'emeghị ihe nkiri ahụ soro Ted Bundy, mana ha anaghịzi agbachi nkịtị.
Mama Liz Kendall na nwa nwanyị Molly Kendall
Liz chetara nzukọ mbụ nwa okorobịa mara mma na klọb abalị ebe ọ gwara ya ka ọ gbaa egwu. Mgbe ya na ya kparịtachara ụka ọ rịọrọ ka onye ọbịa mara mma nke kpọrọ aha ya bụ Ted kpọta gị n'ụlọ. Ọ gwara ya ka ọ nọrọ n'abalị ahụ, mana ọ bụghị n'ụdị mmekọahụ. Ha abụọ rahụrụ ụra n’elu akwa ya, yikwasị uwe n’elu ya.
N’ụtụtụ echi ya, ọ tụrụ Kendall n’anya ka ọ tetara ma hụ na Bundy tetere ụra n’oge, kpọtee nwa ya nwanyị ka o dina n’elu ụlọ ebe ọ nọ, ma nọrọ na kichin na-eri nri ụtụtụ. Nke a bụ furthest image si ogologo anụ metụtara na aha. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, Bundy abanyela n'ezinụlọ ha abụọ.
Kendalls na Ted
Na akụkụ otu n'ime docuseries abụọ ahụ na-akọwa nzukọ mbụ ha na Bundy. Ha na-enyocha mmetụta mbụ ha, ahụmahụ ha, na afọ anọ mbụ ha nọrọ. Liz kwagara Seattle na ebumnuche nke ịrụ ọrụ maka Mahadum Washington. Ọ chọrọ ịmalite ndụ ọhụrụ maka onwe ya na nwa nwanyị 3 dị afọ na ihe mgbaru ọsọ nke izute Mr. Right. Ọ maghị na onye ọ ga-ezute ga-abụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị nke ahụ.
N'ime afọ ndị mbụ ahụ Liz na Molly na-edekọ otu nwa okorobịa na-acha anụnụ anụnụ na onye na-achọsi ike isi tinye aka na ezinụlọ ha. Bundy ga-egwuri egwu na Molly na umuaka agbata obi. Ezinụlọ nke na-adịghị mma nke mmadụ atọ ga-akpọ nwanne nwanne Bundy nke afọ 12 ka ọ pụta.
Bundy na Kendalls
Ihe omume nke mbụ dere nke a na ọtụtụ foto nke ihe na-egosipụta oge obi ụtọ, ncheta mara mma, na ihu ọchị na ị chefuru na ị na-ele ihe ngosi banyere egbu egbu. Ọ bụ nghọta n'ime ndụ Bundy nke na-awụ akpata oyi n'ahụ maka ọbara na mgbukpọ ahụ ọ bụ aha ọjọọ.
Mmiri Na-amalite Changegbanwe
Kendall nwere mmasị na Bundy na-eto eto wee chee na ya nọ na mmekọrịta ịhụnanya. Otú ọ dị, ka afọ na-aga n'ihu, ọkọlọtọ na-acha uhie uhie ji nwayọọ nwayọọ malite ịpụta. Ihe dị ka afọ abụọ na ọkara n'ime mmekọrịta ahụ, ihe dịka otu afọ na ọkara tupu igbu ọchụ mbụ a kọrọ, otu n'ime ọkọlọtọ mbụ gbagoro. Bundy ga-etu Liz ohi maka izu ohi.
Ọ bụ ihe ama ama ama Bundy bụ kleptomaniac. E zuru ọtụtụ n'ime ihe onwe onye Bundy nwetara na ndụ ya niile, ọ masịrị ya ịgwa ya banyere ihe ndị a rụzuru. Ọbụghị naanị mpako, mana were nganga.
N'oge Bundy rụkwara ọrụ maka otu pati Republican. Otu n'ime ọrụ ya bụ iji mee ka onye iro ahụ ghara ịma ihe dị iche iche ma kpokọta ozi. Ọ ga-anya isi na-amaghị aha ya na-adịghị aghọta. Nke a bụ mgbe Bundy ghọtara uru na ike nke ogaga, nke o jiri mee ihe n'oge ndụ ya nke igbu ọchụ.
Igbu mmadu Amalite
Dị ka ọtụtụ akụkọ si kwuo, na Jenụwarị 4, 1974 Bundy gburu ọchụ mbụ ya na Mahadum Mahadum. Karen Epley ahụtụbeghị Bundy tupu ọ bata n'ime ụlọ ya ma wakpo ya n'ụzọ obi ọjọọ. Mmerụ ahụ o mere kpatara nsonaazụ adọbiri, ụbụrụ mebiri emebi, yana ịnụ na nhụhụhụ ụzọ.
Onye lanarịrị Karen Epley
Mgbe ọ na-akọ ahụmahụ ya, Epley na-akọwa na nke a bụ oge mbụ ọ na-ekwu okwu banyere ihe omume ahụ. Ọ chọrọ ịnọ naanị ya ma bie ndụ. Agbanyeghị, ọ kwetakwara na enwere ọnọdụ nke ịchekwa ihe nzuzo nke ndị na-eme ihe na mpụ ha. Otu echiche a nke "ichebe onye mere ihe ọjọọ" ka dị ndụ taa, ọ bụ ya mere na ọtụtụ ndị e metọrọ n'ụzọ mmekọahụ ka na-agabeghị n'ihu ịkọwa mpụ.
4 izu mgbe e mesịrị
Naanị otu ọnwa mgbe e mesịrị na Jenụwarị 31, Bundy tiri ọzọ. Mpụ a nwere ọtụtụ myirịta na mwakpo a na Epley, mana Linda Healy bụ onye ihe a na-emeghị ndụ. Ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya bụ ndị Healy na-akọ akụkọ ya.
Healy bi n'ụlọ ụmụ agbọghọ mgbe a gbajiri ụlọ ya wee kụọ ya ihe ma kpọọrọ ya n'ime ụlọ ya. E meghi ka o doo anya ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ bụ na ọ bụghị mgbe ewepụrụ ya n'ụlọ ya. Mana, akọwara na Bundy doziri akwa ya iji kpuchie ọbara ya na akwa ahụ, wepụ akwa uwe mwụda ọbara ya iji chekwaa n'ime ebe a na-edobe uwe, ma yikwasị ya uwe dị ọcha tupu ọ kpọpụta ya n'ụlọ.
Mgbanwe na Bundy
N'oge a ka ọ pụtara nye Kendall enwere mgbanwe ndị ọzọ na-eme na Ted. Otu n'ime esemokwu ndị ọzọ pụtara ìhè bụ na Bundy ga-apụ n'anya ụbọchị ụfọdụ. Ha na-alụ ọgụ na okwu ndị ọzọ, nke ọ na-adị jụụ n'oge.
Ada Molly chetakwa oge ndị a. Ọ na-echeta na ọ hụghị Bundy ka ọ dị ukwuu, yana obere ọrụ metụtara ezinụlọ n'etiti mmadụ atọ ahụ. Liz weere nke a n'onwe ya wee malite ị drinkụ mmanya. Ọ maghị na ọdịdị ya na-agbanwe, na-anọghị ya n'ụzọ anụ ahụ, na mgbanwe ọnọdụ uche na-adịghị agbanwe agbanwe nke e kwuru banyere ya. Nke a bụ mmalite nke oge igbu ọchụ nke Bundy.